Al-Shabaab oo weerar ku bilowday qaraxyo ku qaaday deegaanka Baar Sanguuni – Wakaaladda Wararka Hiilnews
Al-Shabaab oo weerar ku bilowday qaraxyo ku qaaday deegaanka Baar Sanguuni
Sabti, Janaayo, 19, 2019, (HNN)Al-Shabaab ayaa saaka waabarigii weerar ku bilowday qaraxyo ku qaaday Saldhig Ciidamada xoogga dalka iyo kuwa Jubbaland ku lahaayeen deegaanka Baar Sanguuni ee Gobolka Jubadda Hoose.
Gaadiidka qaraxyada loo adeegsaday ayaa la sheegay in lagu weeraray afaafka hore ee Saldhigga Ciidamada, iyadoo la soo sheegayo inay ahaayeen qaraxyadii ugu badnaa hal mar ay ku weerarana saldhig Ciidan.
Wararka qaar ayaa sheegaya in gaadiidka Al-Shabaab u adeegsadeen qaraxyada ay gaarayaan illaa tobaneeyo oo qaarkood aanay qarxin, sida warbaahinta Maxalliga ay sheegayaan.
Dagaal fool ka fool ah oo Ciidamada dowladda iyo dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa ka dhacay Saldhigga, waxaana dagaalka uu qaatay ku dhowaad labo saacadood.
Al-Shabaab ayaa sheegay inay la wareegeen saldhiga, kuna furteen saanad hub ah, sidoo kalena ay la wareegeen Saldhigga.
Hase ahaatee Saraakiisha ciidanka Baar Sanguuni ayaa sheegaya inay iska caabiyeen weerarka Al-Shabaab, dibna uga saareen halkii ay soo weerareen.
Al-Shabaab ayaa dhowr jeer oo hore weeraray Saldhigga Ciidamada ee Baar Sanguuni, sanadkii 2018 ayay aheyd markii ciidamada dowladda ayaa la wareegay saldhigga, iyadoo bishii June Al-Shabaab ay weerar is qarxin iyo mid toos ah ku qaaday.
Deegaanka Baar Sanguuni ayaa magaalada Kismaayo u jira illaa 45KM, waxaa deegaankaas saldhig ku leh Ciidamada xoogga dalka iyo kuwa Jubbaland.
Al-Shabaab oo weerar ku bilowday qaraxyo ku qaaday deegaanka Baar Sanguuni added by Ciise Cabdi Ciise on January 19, 2019